ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်း၊ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၊ မီနူးများအတွက် Ketogenic အစားအစာ | တရားဝင် site Keto Guru
ယခုလူအများစုသည်ကိုယ်အလေးချိန်ကျအောင်အသုံးပြုသော ketogenic အစားအစာကိုအမှန်တကယ်လူများအားဝက်ရူးပြန်ရောဂါနှင့်ကုသရန်တီထွင်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။၎င်းကြောင့်များစွာသောသူတို့သည်ဤ" ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသော" ရောဂါ၏သရုပ်လက္ခဏာများကိုသူတို့၏ကလေးများအားလျှော့ချနိုင်ခဲ့ပြီးအချို့မှာမူ၎င်း၏တည်ရှိမှုကိုလုံးဝမေ့သွားကြသည်။
သို့သော်တိုးတက်မှုသည်ရပ်တန့်သွားခြင်းမရှိသောကြောင့် ketogenic အစားအစာကိုဤရည်ရွယ်ချက်အတွက်အလွန်ခဲယဉ်းသည်။သို့သော်သူမကိုယ်ထည်ကိုပါးနပ်။ သွယ်လျသောခန္ဓာကိုယ်ကိုချစ်မြတ်နိုးသူများကြားတွင်သူမသည်အလွန်ရေပန်းစားသည်။
ပြီးနောက်၊ ၎င်းသည်ခန္ဓာကိုယ်ကိုခြောက်သွေ့စေရန်၊ အပိုပေါင်များဖယ်ရှားရန်နှင့်တစ်ချိန်တည်းတွင်ကြွက်သားများကိုထိန်းသိမ်းရန်ကူညီသည်။ထို့အပြင် ketogenic အစားအစာသည်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းဖြင့်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သည်။
ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်းအတွက် ketogenic အစားအစာသည်အခြေခံသဘောတရားသုံးခုဖြစ်သောပရိုတိန်း၊ပရိုတိန်း - အစာတွင်ပါဝင်မှုမြင့်မားခြင်းကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကြွက်သားများခြောက်သွေ့ခြင်းမှကာကွယ်ပေးသည်။ အစားအဆီသိုလှောင်ခန်းများမှစွမ်းအင်ထုတ်ယူခြင်းဖြင့်ကိုယ်အလေးချိန်လျော့ကျစေသည်။
Ketone သည်ကျွန်ုပ်တို့ခန္ဓာကိုယ်၏စွမ်းအင်ဖြစ်သောကာဗွန်ဟိုက်ဒရိတ်ကိုအစားထိုးသည်။ဆေးဘက်ဆိုင်ရာရှုထောင့်မှကြည့်လျှင် ketones များသည်အဆီ၏အက်ကွဲသည့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်သည်အကယ်၍ ဤဖြစ်စဉ်ကိုအတုပြုလုပ်ခဲ့လျှင် (ဆိုလိုသည်မှာ၊ ဘိုဟိုက်ဒရိတ်အသုံးပြုခြင်းကိုလုံးဝဖျက်သိမ်းခြင်းအားဖြင့်) ၎င်းသည်ကိုယ်ခန္ဓာတွင်အန္တရာယ်ရှိသောအရာဝတ္ထုများစတင်စုဆောင်းလာလိမ့်မည်။
ထို့ကြောင့်၊ အကယ်၍ သင်သည် ketogenic diet ဖြင့်ကိုယ်အလေးချိန်ကိုလိုချင်လျှင်၊ ၎င်းအရာ ၀ တ္ထုကိုခန္ဓာကိုယ်မှဖယ်ရှားပစ်ရန်သင်ယူရမည်ဟုနားလည်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။တဖန်သင်တို့နည်းလမ်းများစွာအတွက်လုပ်နိုင်:
glycogen စတိုးဆိုင်များကိုပြန်လည်ဖြည့်တင်းရန်တစ်ပတ်လျှင် ၁-၂ ကြိမ်၊ အဘိုဟိုက်ဒရိတ်အစားအစာများစားပါ။
ketogenic အစားအစာသည်ဘိုဟိုက်ဒရိတ်ကိုအစားအစာမှလုံးဝမဖယ်ထုတ်နိုင်သော်လည်းတစ်နေ့လျှင် ၃၀ ဂရမ်အထိလျော့ချသည်ကိုသတိပြုပါ။ဤပမာဏသည် glycogen စတိုးဆိုင်များကိုပုံမှန်အကွာအဝေးတွင်သိုလှောင်ရန်မလုံလောက်ပါ။ဒီလိုလုပ်ဖို့၊ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနေ့တွေကိုစီစဉ်ဖို့လိုအပ်တယ်။အောက်ပါအတိုင်းသင်စားရန်လိုအပ်သည် - ၅ ရက်သာပရိုတိန်းအစာ၊ ၂ ရက်ဘိုဟိုက်ဒရိတ်။
ဒီအစားအစာကိုထိန်းသိမ်းရင်းဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကိုလည်းခွင့်ပြုထားတယ်။သို့သော်၎င်းတို့တွင်ဘိုဟိုက်ဒရိတ်ပါဝင်သည်ကိုစိတ်စွဲမှတ်ထားသင့်သည်၊ ထို့ကြောင့်သူတို့ကိုအလွန်အကျွံစားသုံးသင့်သည်။သင်သည်အောက်ပါ menu ကိုသုံးနိုင်သည်။ (သင်တစ်စုံတစ်ရာကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်၊ သို့သော်ညွှန်းကိန်းများအရ၎င်းသည်အတူတူပင်ဖြစ်သင့်သည်) ။
စည်းကမ်းချက်အရကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်မနက်ခင်းတွင်နို့ကြက်ဥကိုစားကြသည်။ကြက်ဥများသည်ခွင့်ပြုထားသောအစားအစာများစာရင်းတွင်ပါဝင်သောကြောင့်သူတို့ကိုနံနက်စာစားရန် Omelet ပြုလုပ်ရန်အသုံးပြုနိုင်သည်။ဒါဟာဆီမထည့်ဘဲ,2ဥတစ်စုံနှင့်အတူချက်ပြုတ်ရန်အကြံပြုသည်။သငျသညျ omelet ၎င်း၏စင်ကြယ်သောပုံစံ၌စားနိုင်, ဒါမှမဟုတ်သင် 1 ခရမ်းချဉ်သီးနှင့်ကုန်တယ်အစိမ်းရောင်ထည့်နိုင်ပါတယ်။
ဒီတော့ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်ကိုတွက်ကြည့်ရအောင်။ဥများတွင်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၀. ၇ ဂရမ်၊ ခရမ်းချဉ်သီးနှင့်အပင်များတွင် ၅ ဂရမ်စီပါ ၀ င်သည်။စုစုပေါင်းထိုသို့သောနံနက်စာတွင် ၁၁ ဂရမ်သာဘိုဟိုက်ဒရိတ်ပါဝင်သည်။မဆိုးပါဘူး။
နေ့လည်စာအတွက်၊ သင်ရွေးချယ်သောမည်သည့်အသား (၁၀၀ ဂရမ်) ချက်ပြုတ်နိုင်သည် (ဝက်သား မှလွဲ၍ အစားအစာထုတ်ကုန်မဟုတ်သောကြောင့်) ။အမဲသားနှင့်နွားစားခွက်ကိုပိုနှစ်သက်သင့်သည်။အသားများကိုဆီမပါဘဲမီးဖို၌ပြုတ်နိုင်သည်။စွပ်ပြုတ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်စွပ်ပြုတ် (အမှုန် ၁၀၀ ဂရမ်) သည်ဘေးထွက်ဟင်းတစ်မျိုးအဖြစ်ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။သင်သည်သင်၏နေ့လည်စာတွင်ဒိန်ခဲ (ဂရမ် ၄၀ ထက်မပို)၊ သခွားသီးတစ်လုံးနှင့်လတ်ဆတ်သောသစ်လတ်ဆတ်တစ်ထပ်ထည့်နိုင်သည်။
ကျနော်တို့ဘိုဟိုက်ဒရိတ်ပမာဏကိုရေတွက်။Steamed ဟင်းသီးဟင်းရွက်စွပ်ပြုတ်သည် ၇ ဂရမ်၊ သခွားသီး - ၄ ဂရမ်ပါရှိသည်။အသားနှင့်ဒိန်ခဲတွင်ဘိုဟိုက်ဒရိတ်မရှိပါ။စုစုပေါင်း ၁၁ ဂရမ်သာရှိသည်။
ညစာအတွက်, အသားအစား, သင်သည်ငါးအပိုင်းအစ (ဂရမ် 200 ခန့်) ကိုစားနိုင်, အစိမ်းရောင်အသုပ်အရွက်စုံတွဲတစ်တွဲ, သခွားသီးနှင့်ခရမ်းချဉ်သီးထည့်ပါ။ကြက်ဥတစ်လုံးတည်းစားနိုင်သည်။ထိုကဲ့သို့သောညစာစားပွဲသည်ပေါ့ပါးပြီးအစာအိမ်အတွင်း၌ ၀ မ်းနည်းခြင်းဝေဒနာကိုသက်သာစေလိမ့်မည်။
ဒီညစာမှာကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်ပမာဏကိုတွက်ကြည့်ရအောင်။ငါး - ထိုတွင်အသားများ၌ကဲ့သို့ဘိုဟိုက်ဒရိတ်မရှိ၊ ဥတစ်လုံး ၀. ၇ ဂရမ်ခန့်၊ ခရမ်းချဉ်သီး ၅ ဂရမ်၊ လတ်ဆတ်သောသခွားသီး ၄ ဂရမ်၊ ဆလတ် ၁. ၃ ဂရမ်ဖြစ်သည်။စုစုပေါင်း 12 ဂရမ်ဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးတော့စားလိုက်တဲ့ carbs စုစုပေါင်းကိုတွက်ရင် ၃၄ ဂရမ်ရတယ်။ဒီဟာအရမ်းသေးတယ်အကယ်၍ အစားအစာကိုထိန်းသိမ်းနေစဉ်သင်အိပ်ချင်နေပါက (သို့) သင်မြန်မြန်ပင်ပင်ပန်းလာသည်ကိုသတိပြုမိလျှင်၊ ၂ ဆခန့် (၆၀ ဂရမ်အထိ) စားသုံးသောဘိုဟိုက်ဒရိတ်ပမာဏကိုတိုးမြှင့်ဖို့လိုအပ်လိမ့်မည်။
ကျန်းမာရေးအတွက်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်နိုင်သော ketone ထုတ်လုပ်မှုကိုဤအစားအစာကလှုံ့ဆော်ပေးသောကြောင့်ဆရာဝန်နှင့်ကြိုတင်တိုင်ပင်ရန်လိုအပ်သည်။သို့မဟုတ်ပါကပိုမိုဆိုးရွားလာခြင်းသို့မဟုတ်ရောဂါအသစ်များကို "အပိုဆုကြေး" အဖြစ်ရရှိရန်သင်စွန့်စားသည်။